के रुसले सबैभन्दा पहिले बनायो कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन, बेलायत र चीन पछि परे ? | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
के रुसले सबैभन्दा पहिले बनायो कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन, बेलायत र चीन पछि परे ?
access_time२०७७ साल असार २९ गते, सोमबार ०३:२८ PM chat_bubble_outline Comments folder_open स्वास्थ्य​ मुख्य खबर​ कोरोना अपडेट
एजेन्सी । रुसको सेचेनोभ मेडिकल युनिभर्सिटीले कोरोना भाइरसविरुद्धको सफल परीक्षणको दावी गरेको छ । आइतबार मानवमा परीक्षण गरिएको र सफल भएको पहिलो कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार पनि आएको छ । इन्स्टिच्युट फर ट्रान्सलेसन मेडिसिन एण्ड बायोटेक्नोलोजीका निर्देशक वदिम तरासोवले यो कुराको दावी गरेका छन् ।
रुसको न्युज एजेन्सी टिएएसएसका अनुसार १८ जुनमा भ्याक्सिनको पहिलो मानव क्लिनिकल परीक्षण गरिएको थियो । पहिलो परीक्षणमा १८ जना स्वयंमसेवकले भाग लिएका थिए । त्यसपछि जुन २३ मा दोस्रो चरणको परीक्षण २० जनामा गरिएको थियो ।
रसियाको समाचार सार्वजनिक भएसँगै धेरैले अहिलेसम्म सबैभन्दा अगाडि रहेका चीन र बेलायत पनि पछि परेकी भन्ने प्रश्न गरेका छन् । तर अनुसन्धानमा संलग्नहरुले भने यो भ्याक्सिनकै पहिलो चरणको मानव परीक्षणमात्र भएको बताएका छन् ।
वैज्ञानिकहरुले कुनै पनि भ्याक्सिनको पहिलो चरणमा २० देखि ८० जनामा परीक्षण गरिने र फरक फरक मितिमा गरिने जनाएका छन् । त्यसैले रसियामा उत्पादन भएको भनिएको भ्याक्सिनले पहिलो चरणमात्र पार गरेको देखिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले अहिलेसम्म जम्मा तीनवटा भ्याक्सिनमात्र तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणमा पुगेको जनाएको छ । जसमा चीनका दुई र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बेलायतको एकमात्र रहेका छन् ।